China Abicah ngerabha Cushion Yokwenza amakhadi eLaminator abavelisi kunye nabathengisi | UCayce ngoMeyi
Abicah irabha yomqamelo yokwenza i-laminator yokwenza amakhadi yenzelwe kwaye yenziwa yinkampani yethu ezinikele ekuxhaseni ishishini lokwenza amakhadi ngokweemfuno zeemarike, ezifanelekileyo kuzo zonke iintlobo zamakhadi ebhanki, amakhadi etyala kunye nemveliso yekhadi elilumkileyo.
I-silicone ibhulashi yerabha eveliswe yinkampani yethu isebenzisa iintlobo ezimbini zokwakheka kobume, oko kukuthi i-KXM4213, amacala amabini abicah irabha enepateni, ilaphu eliphakathi le-fiberglass. I-KXM4233, amacala amabini aziva, umaleko ophakathi werabha yesilicone.
I-KXM4213 (Omabini amacala abicah irabha kunye nephethini, ilaphu le-fiberglass eliphakathi)
Impahla ekrwada engeniswe eJamani, iqondo lobushushu eliphezulu ukumelana, luthambe elungileyo
Ubushushu buqhuba ngokukhawuleza, bushushu ngokufanayo busasazwa
Ukuhlala kwakhona koxinzelelo oluphezulu.
Ukumelana nesinyibilikisi, ukuguga ukumelana, umhlwa ukumelana.
I-KXM4233 (omabini amacala aziva, irabha yesilic ephakathi)
Impahla ekrwada inokubuyisa ubushushu, inganyangeki ngamandla.
Ukufakwa emanzini okufanelekileyo, kunokususa ngokufanelekileyo i-bubble kunye ne-watermark yekhadi lomphezulu.
Ukubhaqa kakuhle, wandise ixesha lokuphila kwebhodi yokufudumeza kunye nebhodi yokulaminetha.
Umba Amagama ahamba kunye KXM4213 KXM4233
Izinto ezingaphezulu Irabha abicah kunye ipateni Ukuva ukumelana nobushushu
Izinto eziphakathi Ilaphu leFiberglass Irabha emnyama emnyama
Ukuqina konxweme A 55 ± 5 50 ± 5
Uqine (N / mm) 80 60
Unamatheliso (N / mm) 4.5 4.5
Ubushushu ukumelana ℃ 230 200
Umbala mhlophe mhlophe
Iimpawu zayo zezi zilandelayo:
(Ipateni enamacala amabini abicah iglasi yefayibha yelaphu)
• Imveliso yamkela imathiriyeli yaseJamani engenisiweyo ekrwada, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuguquguquka okuhle.
• Ukuhambisa ubushushu okukhawulezayo kunye nokusasazwa kobushushu okufanayo kunokonyusa kakhulu imveliso xa kusenziwa inkqubo yokuthambisa.
• Inokuxhathisa okuhle koxinzelelo, akukho deformation, inokuthenjwa kwaye ihlala ixesha elide.
• Inceda ekupheliseni imingxunya kunye neenkozo ezintle kumphezulu kunye nokuphucula umgangatho wemveliso.
• Ukuchasana nesinyibilikisi, ukumelana nokuguga, ukunganyangeki, ukungabinetyhefu kunye nokungabi nasongo, ngokuhambelana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo.
Imathiriyeli ekrwada yemveliso inokumelana nobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo, ihlangabezane neemfuno zetekhnoloji yokwenza amakhadi kunye ne-lamination, kwaye isetyenziswa ngokubanzi njengezinto ezisetyenziswayo zokwenza amakhadi.
Ukukhawulezisa kunye nobushushu obufanayo, ukuphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokonga umbane.
• Inentsebenzo elungileyo yokufunxa amanzi, inokuphelisa ngokufanelekileyo amaqamza kunye neempawu zamanzi kumphezulu wekhadi, kwaye iphucule kakhulu inqanaba lokufumana imveliso.
• Inentsebenzo elungileyo yokuthintela, iyakuthintela ukukrala okubangelwa kukunxibelelana okunzima phakathi kwesitya sokufudumeza kunye ne-laminate, kwaye yandisa ubomi benkonzo yesitya sokufudumeza kunye ne-laminate.
• Kulula ukuyisebenzisa, ukugcina iiyure zomntu endaweni yezinye.
Egqithileyo Abicah irabha Cushion yoPapasho oluShushu
Okulandelayo: Iphepha leRabha leSilicone leLaminator yeSola